Beerta Xudunta Milatariga iyo xarumaheeda Spain | Fardaha Noti
Jenny monge | | Fardo, Fardaha fardaha, Taranka
Midka loo yaqaan "Yeguada Militar" wuxuu ka bilaabmayaa Isbaanish kadib isbeddelada bulshada iyo dhaqaalaha ee uu soo saaray Dagaalkii Xorriyadda. Waxaa bilaabmay xilli siyaasadeed oo soo afjari doona Nidaamkii Hore, ee horseeday ku dhowaad luminta beeraha waaweyn ee biraha taasi waxay ka jirtay dalka. Tani waxay dhibaato ku keentay saadka ciidanka.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa dhacay?
Xaaladdaas oo ay wajahday, sanadkii 1864, ayaa dowladda Isabel II, soo saartay a Wareegto Boqortooyo oo dib-u-habeynta faras taranka loo wakiishay Hubka Fardooleyda ee gobolka Isbaanishka.
Mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu horreeyay ee ay qaadaan waxay ahayd abuuritaanka dhigaal haraaga. Kadib, 1893 waxay abuurtay beer faaruuq ah oo ururinaysa astaamaha iyo ujeedooyinka ugu waaweyn si loo xaliyo faras la'aanta loogu talagalay ciidanka. Isla markaana ay u shaqeeyeen hagaajinta taranka jira. Xarunta ugu horeysa ee fardooleydan waxay noqon doontaa Córdoba.
1 Xarumaha Taranka Faraska iyo Cutubyo ku yaal Spain
1.1 Xarunta Taranka Milatariga ee Ávila
1.2 Xarunta Milatariga Taranka Faraska Écija
1.3 Xarunta Milatariga Taranka ee Jeréz
1.4 Cudurka Militariga Lore-Toki
1.5 Xarunta Taranka Milatariga ee Caballar de Mazcuerras (Cantabria)
1.6 Xarunta Taranka Milatariga ee Caballar de Zaragoza
Xarumaha Taranka Faraska iyo Cutubyo ku yaal Spain
Isbaanishka waxaan ka heli karnaa lix xarumood oo taran faras FAS ah, iyo sidoo kale shaybaar cilmi baaris oo lagu dabaqay Córdoba.
Aynu wax yar ka hadalno xarumahan:
Xarunta Taranka Milatariga ee Ávila
Markii hore xaruntan ayaa ahayd lagu abuuray magaca "Bakhaarka Fardo Horse 6aad" by Amarka Boqortooyada ee Maarso 22, 1905, oo ku taal magaalada Alcalá de Henares.
Dhowr iyo toban sano kadib, qayb caan ah ayaa lagu daray Trujillo (Cáceres) magaceedana waxaa loo beddelay «Deposit of Stallions of the First xoolaha»
1931, adeegyadan taranka farasku waxay ka mid noqdeen Wasaaradda Horumarinta, kana tagtay Wasaaradda Dagaal. Si kastaba ha noqotee, ma qaadan doonto waqti dheer in lagu soo laabto oo ay ku tiirsanaato Wasaaradda Dagaalku. Tan iyo markaas sii waday in loogu yeero magacyo kala duwan oo is xigxigay. Ugu dambayntii waxay ku taalay Ávila degitaanka beerta El Padrillo.
Xarunta Milatariga Taranka Faraska Écija
Taariikhda xaruntan Waxaa dib loo raadin karaa 1946, markii qaybta Mares de Tiro del Norte laga abuuray Pau (Gerona) iyo inay ku tiirsanayd Córdoba. Tan awgeed, saddex iyo toban marsooyinka ardennes iyo saddex iyo toban kuwaas oo laga soo tallaabay Bretons.
Taranka fardaha qabyada ah waxay ahayd lama huraan in laga madax banaanaado soo dejinta shisheeyaha, marka lagu daro haysashada wax soo saarka lo'da ee shaqada culus.
Mareysyadan ayaa kala ahaa waxay si tartiib tartiib ah ugu biirin lahaayeen Bretonn iyo postier-Breton, taas oo bilaabatay in lagu daboolo xayawaano iyagoo gaadhay gabagabadii in jinsiyadahani ahaayeen kuwii ugu fiicnaa ee la jaanqaaday cimilada Isbaanishka.
Sannadkii 1990 dib-u-habeyntii taranka fardaha ayaa loo wareejiyey Qeybta Faraska Qabyo-qoraalka oo loo wareejiyey Écija
En 2007 Xarunta Milatariga Taranka Faraska Écija waa la sameeyay, waxay isu keentaa Bakhaarka Écija Stallion iyo Icija Military Stud. Xarunta waxaa loo qoondeeyay hawlgallada lagu ilaalinayo xayawaannada xaalad qumman, iyadoo si xilliyo ah u fulisa baaritaanka taranka iyo bacriminta, soo jeedinta keenista Gobolka Bandhigyada, ka-qaybgalka baahiyaha beeraleyda iyo Golaha Magaalada, iyo soo-jeedinta ku wareejinta xoolaleyda beeraleyda gaarka loo leeyahay buuxiyaan shuruudaha qaarkood, inta lagu jiro muddada caymiska.
Xarunta Milatariga Taranka ee Jeréz
Xaruntan waxaa la abuuray 2006 iyadoo la isku daray Yeguada Militar iyo Depósito de Sementales de Jeréz. Sidoo kale, lo'da oo dhan iyo agabyada labadaba waxay ka mid noqon doonaan Xarunta Milatari ee cusub ee Cría Caballar de Jeréz de la Frontera.
Cudurka Milatariga Jeréz waxaa la aasaasay 1893 iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadida foalsiyada hagaajin doonta astaamaha iyo xaaladaha Faraska Koowaad ee Xusuusta Ciidanka. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale doonayeen inay si la mid ah u sameeyaan tartamada iyo noocyada toogashada. Beerta xargaha waxaa markii hore lagu rakibay Dehesa de Moratalla oo ku taal Hornachuelos (Córdoba).
Intii lagu guda jiray Regency of María Cristina, waxaan ka faalloonay bilowgii maqaalka in Meelaha Stallion, midkood ayaa loo xilsaaray Jerez sanadkii 1841.
Cudurka Militariga Lore-Toki
Taageerada maamulka millatariga ee taranka Faraska Ingiriisiga ee Thoroughbred ee Spain wuxuu ahaa mid aad u kooban bilowgii, oo ay ku jiraan kaliya shan mareeg oo ka mid ah noocyadan ku jira qaybta militariga ee Córdoba dhamaadkii qarnigii XNUMXaad. Ku King Alfonso XIII wuxuu aad u jeclaa labadiisa Ingriis Thoroughbreds iyo tartanka fardaha labadaba. Sidaa darteed 1921, Qeybta Ingiriisiga ee Thoroughbred waxaa lagu aasaasay Marquina (Guipúzcoa), waxaa loo kiraystay Count of Urquijo. Imaatinka Jamhuuriyadda 1931, tartankii fardaha ayaa fasax galay qaybtan cusub waxaa loo wareejinayaa Cordovan Military Stud.
Sannadkii 1940 General Franco wuxuu ugu deeqay bakhaar iyo dufcad maroodi Ingiriis ah Thoroughbred qaybtan, taas oo hadiyad ka ahayd Mawduuca Faransiiska. Xaqiiqadan, ayaa la sameeyay Qeybta tarankaani dib ayaa loo habeeyay, iyadoo lagu wareejiyay xayawaanada la midka ah Lasarte sanadkii 1941, si ay u qabsadaan beerta Lore-Toki, halkaasoo ay ku taalay beerta haraaga ah ee hadda aan jirin ee Alfonso XIII.
Gobolku wuxuu ka helay beertan dhaxalka Alfonso XIII marka lagu daro kuwa deriska la ah Ollo iyo Amassorrain, iyagoo mideynaya dhamaan dhulkii loogu talo galay beerta isteerinka sida Lore-Toki.
In kasta oo waxa kor ku xusan ay dhacayeen, ayaa Guriga tartanka ee Yeguada Militar, oo ku yaal Madrid.
Waqtigan xaadirka Milatariga Lore-Toki iyo tartanka xasiloon oo ku tiirsan, sii wata shaqadooda kor u qaadista taranka Ingiriisiga Thoroughbred ee xarumaha San Sebastián iyo Lasarte. Sidoo kale sanadkii 2008 Taranka faraska Anglo Arab ayaa lagu daray.
Xarunta Taranka Milatariga ee Caballar de Mazcuerras (Cantabria)
Fue oo la abuuray 2006 iyada oo loo marayo isdhexgalka Lore-Toki Military Stud, Ibio Military Stud iyo Santander Stallion Depot. Si kastaba ha noqotee, Cudurka Milatariga ee Lore-Toki wuxuu noqon lahaa xarun madax-bannaan waana taas sababta aan horay uga hadalnay.
Sanduuqa Santander Stallion Deposit waxaa la abuuray 1920 taasoo ka dhalatay hirgelinta dib u habeynta qorshaha Cría Caballar sanadkii 1919.
Yeguada Ibio waxaa la abuuray 1972 iyadoo ay iibsatay Gobolka beeraha ee loo yaqaan "Casa de la Guerra" gudaha Mazcuerras (Cantabria). Beertan ayaa ka soo kacday 30 Ha ilaa 85 Ha.
Waqtigaan la joogo Mazcuerras, waxaa ku taalo xarun taranka faraska oo leh Stallions ka mid ah kuwa Isbaanishka ah oo leh astaamo loogu talagalay Isboortiga, Isbaanishka Saafi ah, Anglo-Arab, Hispano-Arab, Purebred Arab, Breton iyo Hispano-Breton. Foolasha ayaa la kariyaa illaa ay dib ugu noqdaan Ilaalada Boqortooyada, Xarumaha kala duwan ee Milatariga ee Taranka Faraska, Ilaalada Madaniga iyo Booliska Qaranka.
Xarunta Taranka Milatariga ee Caballar de Zaragoza
Xaruntan waxaa iska leh Hay adda iskeed u maamusha ee Wasaaradda Difaaca "Taranka Faraska ee Ciidamada Qalabka Sida". Waxay ku taallay deegaanka miyiga ah ee Torre de Abejar ee Garrapinillos.
Beerta marka lagu daro howlaha la xiriira taranka taranka, Waxay leedahay meelo daaqsin ah oo loogu talagalay maareynta iyo dameeraha Catalan.
Markii hore, waxay ahayd Deposit number 5 of Stallions, oo leh magacyo kala duwan ilaa kan hada ay heshay 2007. Sidii xaaladihii hore, Stallion iyo Mare Depots waa la midoobay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Beerta meertada milatariga iyo xarumaheeda Spain